Global Voices teny Malagasy » Abaribarin’ny valanaretina COVID ny fitiavantenan’ny tafika amerikàna mitoby ao Okinawa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Jolay 2020 13:05 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Ady & Fifandirana, Fahasalamàna, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, COVID-19
“Teknisianan'ny U.S. Air Force, Sgt. Keon Miller, mpanamory mpamita iraka manokana nafindra ho ao amin'ny Andiany Mpanavotra faha-33, mijery avy eo amin'ny varavarankelin'ny mpitifitry ny HH-60G Pave Hawk iray, 31 Jolay 2019, tany ivelan'i Tobin-tafika an'habakabaka ao Kadena, Japàna.” Ny U.S. Air Force no manodina ny tobin-tafika an'habakabaka ao Kadena ao Okinawa, izay ny tobin-tafika an'habakabaka lehibe indrindra an'ny Amerikàna any Pasifika Andrefana, ary toerana niparitahan'ny COVID-19 tamin'ity Jolay 2020 ity. U.S. Air Force, sary an'i Matthew Seefeldt kilasy voalohany ao amin'ny Airman, avy amin'ny kaonty Flickr-n'ny gazetiboky Airman. . Lisansa: CC BY-NC 2.0 
Nanomboka ny 11 Jolay, nahitàna tranga COVID-19 tao amin'ireo toby miaramila amerikàna ao Okinawa, ka ny ankamaroan'ireo tranga dia hita tao Futenma  sy ireo toby hafa an'ny tafika an-dranomasina amerikàna any akaikin'i Naha, tanàna renivohitra tena be mponina indrindra ao Okinawa. Toa ny U.S. Marines  no manome ny ampahany betsaka indrindra amin'ireo 99 tratry ny valanaretina COVID-19 tao Okinawa ny volana Jolay.
Hatreto, 148 ireo teratany Japoney na mponina ao Okinawa  (tsy ao anatiny ireo mpiasan'ny toby amerikàna ao amin'ilay vakimpileovana) no voatily hoe tratry ny valanaretina COVID-19 hatramin'ny Febroary 2020. Efatra amin'ireny tranga ireny no tafiditra tamin'ilay tatitra toarian'ny 11 Jolay, tsy nisy intsony tranga COVID-19 hita ny 13 Jolay.
Misy mponina 1,45 tapitrisa ao Okinawa, ka raha kely indrindra dia 47.000 amin'ireo no miaramila amerikàna  sy ireo izay mifampiankina aminy. Mitoby ao Okinawa daholo ihany koa ireo olon'ny U.S. Marines, Army, Air Force ary ny Navy, ary amin'ny ankapobeny dia samy manana ny fitsipika azy manokana amin'ny resaka fitondrantena, miaraka amin'ny foibe mpibaiko azy.
Toa an'i Okinawa, ny tanibe Japàna dia nahasoroka  fiparitahana be tamin'ny valanaretina COVID-19 raha ampitahaina amin'ireo firenena maro hafa hatramin'ny nipoahan'ilay valanaretina tamin'ny Martsa, na dia nanomboka tamin'ny 10 Jolay aza, i Tokyo, misy mponina 14 tapitrisa, no nanomboka nitatitra fisiana tranga vaovao mihoatra ny 200 momba ilay aretina tao anatin'ny andro maro nifanesy .
Hatreto, tsy misy ny fanazavàna ofisialy  nataon'ireo manampahefana Amerikàna momba ilay valanaretina ao Okinawa eny anivon'ny olon'ny tafika, na ny nipoirany. Kanefa, misy lahatsary iray mivezivezy ety anaty media sôsialy mampiseho lanonambe natao teny amin'ny torapasika tany amin'ny fiandohan'ny Jolay tany, ka ao anatiny dia toa tsy mivaky loha ireo mpandray anjara raha izay torolalana ofisialy momba ny elanelana sôsialy  napetraky ny governemantam-paritra ao amin'ny vakimpileovan'i Okinawa ho an'ireo toerana natao ho an'ny daholobe.
Lehilahy iray, Amerikàna monina ao Okinawa izay voalaza fa nikarakara ilay hetsika ary mpampiasa Twitter amin'ny solonanarana @IAMCITI  no nizara ilay lahatsary voalohany momba ilay fety teny amin'ny torapasika. Rehefa nambara ny fisian'ny fipariahan'ny valanaretina COVID-19 dia toy ny tsy teo no namafàn'i  IAMCITI ilay lahatsary, saingy tsy talohan'ny nanakianana azy ho nanampy tamin'ny fanelezana ilay valanaretina.
Satria tsy misy ny vaovao momba izay nahatonga ny fiparitahan'ilay valanaretina COVID-19 tamin'ity Jolay ity tao Okinawa, misy ankehitriny ny honohono mandeha ety anaty tambajotra fa ny fahatongavana vao haingan'ireo andiana US Marines sy ny Air Force  tao Okinawa no mety ho tomponantoka tamin'ilay fiparitahan'ny valanaretina.
“Tsy nisy natahorana ny toedraharaha manontolon'ny COVID teto [Okinawa] talohan'ny nahatongavan'ireo andiany avy amin'ny UDP. Toa tsara loatra fa tsy naharitra,” hoy i  Redditor Fastbondgush, maneho hevitra mikasika ilay fiparitahana valanaretina COVID-19 tamn'ity Jolay ity ao amin'ny r/USMC , fantsona iray ao amin'ny Reddit natokana hiresahana ny “U.S. Marine Corps”. Ampahany amin'ny “UDP”, na Unit Deployment Program , misy ireo andiany vaovao afindra mankamina toerana vaovao. Misy ny honohono  hoe nisy andiany vaovao tonga tao Okinawa tany ho any amin'ny Jona tany,  avy any Seattle, fanjakan'i Washington, izay faritra tena nizaka ny mafy tamin'ny valanaretina COVID-19.
Mba hisorohana ny mety ho fiparitahan'ny COVID-19 bebe kokoa, taorian'ilay fiparitahan'ny valanaretina dia natoka-monina tany anaty toby  daholo ireo olon'ny U.S. Marine sy ny Air Force. Na izany aza, naneho ny hasosorany  ireo manampahefana ao Okinawa ny amin'ny tsy nanarahana ny tenin-dry zareo tamin'ny tokony fampiharan'ireo tafika amerikàna ny elanelana sôsialy sy ireo fepetra hafa natao ho fisorohana. Ohatra, vantany vao hita ny fisian'ny fiparitahan'ilay valanaretina, natokan'ny tafika amerikana toerana tany amin'ireo hotely tao an-toerana  ireo miaramila sy ireo mpitantana tao an-toby tratry ny aretina, fa tsy tany amina toerana mitokana tsara kokoa tany amin'ireo toby ao an-toerana.
Tsy nampahafantatra ny daholobe  momba ny haben'ny fahavoazana vokatr'ilay valanaretina ihany koa ny tafika amerikàna, fa naleony nifandray manokana tamin'ny governemantan'i Okinawa. Ny governemantan'i Okinawa no nandray fanapahankevitra nampahafantatra ny fiarahamonina ny fisian'ilay valanaretina eny anivon'ny olon'ny tafika, na teo aza ny tahotra  momba ny ho fahasimbàn'ny fifandraisana  amin'ny tafika amerikàna, ireto farany izay mitantana ny fotodrafitrasa misahana ny fitsaboana miaraka amin'ny famatsiambola atolotry ny governemanta japoney .
Efa ela i Okinawa, mampiantrano 70% amin'ireo fotodrafitrasan'ny tafika amerikàna  any Japàna, no tsy nahazoazo ny fitondrantenan'ireo miaramila amerikàna miisa 45.000 mipetraka ao amin'ilay vakimpileovana. Vao haingana mihitsy, tamin'ny Jona 2020, nohamaivanin'n y Tobin'ny Tafika an'Habakabaka ao Kadena ny fahamaizana izay nanjo olona efa ho ampolony, isan'izany ireo mponina tao an-toerana, vokatry ny entona klaoro sy ny setroka.
Mbola hetsika hafa niteraka korontana koa ny toy ny namonoan'ny miaramila amerikana iray tamin'ny 2016  ny vehivavy iray tao an-tanàna, izay mbola matetika mitranga, sy ireo manampahefana amerikàna voarohirohy aminà fikarakaràna fampielezankevitra anelezana vaovao diso  ikendrena ireo eo an-toerana. Mitohy ny fihenjanana momba ireo fanorenana toby  entina manindry ny mponina ao an-toerana sy ireo mpanao politika ao amin'ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/07/18/148979/
 tobin-tafika an'habakabaka ao Kadena : https://en.wikipedia.org/wiki/Kadena_Air_Base#:~:text=Kadena%20Air%20Base%20%28%E5%98%89%E6%89%8B%E7%B4%8D%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%A0%B4%2C%20Kadena%20Hik%C5%8Dj%C5%8D%29%20%28IATA%3A%20DNA%2C,referred%20to%20as%20the%20%22Keystone%20of%20the%20Pacific%22.
 avy amin'ny kaonty Flickr-n'ny gazetiboky Airman.: https://www.flickr.com/photos/airmanmagazine/49173741536/
 99 ireo olona sy mpandraharaha avy amin'ny tafika amerikàna : https://www.okinawatimes.co.jp/
 148 ireo teratany Japoney na mponina ao Okinawa: https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/chiikihoken/kekkaku/covid19_hasseijoukyou.html
 raha kely indrindra dia 47.000 amin'ireo no miaramila amerikàna: https://dc-office.org/basedata
 tao anatin'ny andro maro nifanesy: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/07/13/national/tokyo-119-new-covid-19-cases/
 torolalana ofisialy momba ny elanelana sôsialy: https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kohokoryu/20200422.html
 fahatongavana vao haingan'ireo andiana US Marines sy ny Air Force: https://www.reddit.com/r/USMC/comments/hq3uwp/who_thought_any_of_this_was_a_good_idea/fxw3z8w/
 hoy i: https://www.reddit.com/r/USMC/comments/hqbung/okinawa_right_now/fxyecvm/
 tany ho any amin'ny Jona tany,: https://www.reddit.com/r/USMC/comments/hq3uwp/who_thought_any_of_this_was_a_good_idea/fxvmt35/
 hotely tao an-toerana: http://english.ryukyushimpo.jp/2020/07/14/32413/
 famatsiambola atolotry ny governemanta japoney: https://ospreyfuanclub.hatenablog.com/entry/2020/07/11/065411
 70% amin'ireo fotodrafitrasan'ny tafika amerikàna: https://globalvoices.org/2015/10/27/from-okinawa-to-the-un-the-protest-against-a-us-military-base-continues/
 namonoan'ny miaramila amerikana iray tamin'ny 2016: https://globalvoices.org/2016/06/10/us-church-members-stage-roadside-vigil-amid-outrage-over-japanese-womans-murder/
 fikarakaràna fampielezankevitra anelezana vaovao diso: https://globalvoices.org/2017/01/21/how-the-us-marines-spread-fake-news-about-an-afghan-terrorist-in-okinawa/
 fihenjanana momba ireo fanorenana toby: https://globalvoices.org/2019/02/09/japanese-pm-staff-restrict-reporter-from-pressers-for-spreading-misinformation-about-environmental-harm/